Ávila - Ihe niile banyere obodo nwere nnukwu nketa akụkọ ihe mere eme | Njem zuru oke
Ávila bu obodo di n'ime obodo kwudoro na Castilla y León na Spain. N'ime ya anyị ga-eweghachi azụ ịmalite ọzọ oge yiri nke oge ochie. Mgbidi nke Ávila bụ otu n'ime ihe atụ doro anya nke mma Romanesque. Ọ bụ otu n'ime ihe ncheta ya kachasị ama. Enwere ihe karịrị mita 1700 nke ije, ebe ị ga-achọpụta ọnụ ụzọ ámá na ụlọ elu.
Mgbe anyị rutere na Katidral anyị ghọtara na ọ bụ otu n'ime ụzọ izizi nke Gothic na Spain. Right na akụkọ ihe mere eme center, ị ga-ahụ Mercado Chico, nke bụ a Roman forum. Basilica nke San Vicente na usoro usoro obí eze ahụ nwere ụfọdụ n'ime ihe karịrị nleta iwu. N'ime ha anyị nwere ike ịkọwapụta aha ụfọdụ dị ka Palacio de los Verdugo ma ọ bụ Palacio de los Dávila ma ọ bụ Palacio de los Velada.
N'ezie, iji nweta nkọwa zuru ezu banyere obodo ahụ dum, ọ dịghị ihe dịka ịga na Mirador de los Cuatro Postes. Emebere ya site na ogidi Doric anọ ma site na ya, ị ga-enweta onyogho panoramic dị ka ebe nchekwa zuru oke nke njem gị. Will ga-erite uru nke gastronomy nke ebe ahụ, na-etinye onwe gị na yemas de Santa Teresa.
Agbanyeghị na mgbidi ya ochie bụ otu n'ime akara ngosi kachasị mma, ịhụ characteristicvila n'otu ụbọchị karịrị ...
Ndị Castañar del Tiemblo
Nature hapụrụ anyị ebe dị ịtụnanya anyị na-agaghị echefu. A na-akpọ otu n’ime ha Castañar del Tiemblo. Ama m…
Gastronomy in Ávila: ị gaghị echefu efere ndị a
Nri lavila nwere mgbọrọgwụ na ngwaahịa mpaghara na ọtụtụ anụ, na-egosi mmetụta ndị Alakụba siri ike,…